AMISOM oo qiratay xasuuqii Golweyn | KEYDMEDIA ONLINE
AMISOM oo qiratay xasuuqii Golweyn
AMISOM, waxa ay sheegtay, in iyada oo la raacayo waajibaadkeeda ku xusan Heshiiskii Isfahamka ee a kala saxiixdeen Midowga Afrika, in Dawladda Uganda ay la xiriiri doonto qoysaska dhibaatada loo geystay si ay ugala hadlaan magta dadkii la dilay.
GOLWEYN, Soomaaliya – Guddi baaritaan oo ka kooban lix xubnood oo ay ku jiraan wakiillo ka socda Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) iyo dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in ciidamada Midowga Afrika ay mas'uul ka yihiin dhimashada todobo qof oo rayid ah, kuwaas oo Agoosto 10, 2021, lagu dilay tuulada Golweyn, oo qiyaastii 90 kiiloomitir (56 mayl) u jirta Muqdisho.
“Guddi xaqiiqo raadin ah oo uu Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya u saaray si ay baaritaan ugu sameeyaan eedeymaha khasaare shacab oo ka dhacday Golweyn 10-kii Agoosto 2021-ka, ayaa ogaaday, in nasib darro, todoboda qof ee la dilay ay ahaayen shacab iyo in sida ay u dhaqmeen ciidankii ku lugta lahaa ay ahayd ku xadgudub Xeerarka Howlgal ee AMISOM” ayaa lagu yiri war ka soo baxay AMISOM.
Howlgalka Midowga Afrika, ayaa sheegay in ay si buuxda u qaateen mas’uuliyadda falalka sharci-darrada ah ee shaqaalahooda, isla markaana ay cadaaladda hor keeni doonaan askarta ku lugta leh.
“AMISOM waxa ay qaadanaysaa mas'uuliyadda buuxda ee falkan xun ee ciidankeeda, waxayna la xisaabtami doontaa ciidankii falka geystay si loo xaqiijiyo in caddaalad loo helo kiiskaan”. Ayaa lagu yiri sido kale.
Ehellada shacabka lagu xasuuqay gobolka Shabeellaha hoose, ayaa hore u sheegay in AMISOM ay diidan yihiin in ay saxiixaan warqadda caddeyn muujinta ah, oo ay ku xusan tahay dadkii ay sida arxan darrada ah u dileen.
19-kii bishii August ee sannadkan 2021, Madaxweynaha Uganda, Yoweri Musevani. ayaa qirtay in askartiisa ay dileen dad rayid ah, Safiirka Uganda ee Soomaaliya iyo Taliyaha ciidanka ka socda Uganda, waxa ay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble kala hadleen kiiskaan 21-kii bishii August 2021.
Marxuumiinta dil wadareedka loo geystay ayaa in muddo ah ku jiray qaboojiye, ehelkooda ayaana dhigayay bibadbaxyo ay ku muujinayeen cabashadooda, iyaga oo isugu soo baxayay wadooyinka Muqdisho.
Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) waa hawlgal, nabad ilaalin goboleed oo ay hawlgeliso Midowga Afrika iyada oo oggolaansho laga helay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, waxaase xilliyo kala duwan lagu eedeeyay gabood-fallo shacab oo aan ka garaaw laahyn.
AMISOM waxaa abuuray Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika 19-kii Jannaayo 2007-dii, waxaana xilligaas lagu bedelay Hawlgalkii Taageerada Nabadda IGAD ee Soomaaliya (IGASOM).